Xukumadii Riyaale Oo Soo Cusboonaysiisay Mashruucii OLalaha Argagaxisnimada | Somaliland.Org
Xukumadii Riyaale Oo Soo Cusboonaysiisay Mashruucii OLalaha Argagaxisnimada
May 26, 2010	Xukumadii Riyaale Oo Soo Cusboonaysiisay Mashruucii OLalaha Argagaxisnimada Ee Somaliland
Hargeysa, Somaliland May 26, 2010 (Somaliland.Org) – Mudooyinkan danbe ayaa waxaa soo badanaya hadalada iyo warbixino kasoo yeedhaya masuuliyiinta xukumada Riyaale iyo xisbiga UDUB. Kuwaas oo dhamaantood isugu biyo shubanaya eedaymo ay dusha ka saarayaan Xisbiag mucaaridka ah ee Kulmiye, oo ay ku sheegayaan mid xidhiidh hoose la leh agragaxisada Alshabaab, ama dadka ku cabsi galinayaan in argagaxisada Alshabaab soo weerarayso Somaliland doorashada madaxtooyadu intaanay dhicin.
Falalka caynkan ihi kuma cusba xukumada Riyaale, waana mid 8dii sano ee ay xukunka haysay kula dhaqmaysay Xisbiga mucaaridka ah ee Kulmiye. Waxaana aynu ka warqabnaa dhacdooyinkii argagaxisnimo ee hore dalka uga dhacay, ee xukumada Riyaale wasiiradeedii ku tilmaameen in Kulmiye ka danbeeyay. Ayna ka mid ahaayeen dhacadadii lagu dilay dadkii ajinabiga, arintaas oo intii aan reer dhoqoshay qaban qoladii argagxisada ahayd ee dishay dadkaa ajinabiga ah, xukumadu ku tilmaantay in ay ka danbaysay Xisbiga Kulmiye.
Maantana waxay arintu maraysaa in Safiirkii Riyaale u fadhiyay Maraykanka Sacad Sheekh Nuur ku cadaatay in uu lug ku lahaa warbixin dhawaan lagu sii daayay warbaahinta xukumada iyo idaacada dawlada ee Hargeisa. Warbixintaa oo lagu af lagaadeeyay qaar ka mid aha madaxda Somaliland, oo uu ku jiro Gudoomiye ku xigeenka Baarlamaanka Somaliland Md Cabdicasii Samaale, Gud Olalada Doorashada Xisbiga Kulmiye u qaabilsan Bariga Dr Maxamed Cabdi Gaboose iyo Eng Maxamed Xaashi. Qoraalkan ayaa isagu ku talax tagay cayda ragan madaxda ah, kuna eedeeyay in ay gacansaar la leeyihiin kooxaha Alshabaab ee Somalia ka dagaalama.
War bixintaa oo warbaahinta taageerta UDUB isku dayday in ay buun buuniso, kana dhigto mid ka soo baxday Urur madaxbanaan, waxaa markii la daba galay cadaatay in cida qortay qoraalkani yahay wakiilka Riyaale u fadhiya USA Mr Sacad Sheekh Nuur, waxaana muuqata in ururkan warqada lagu suntay lasoo macmalay. Ninka Sacad warqadan uu magaciisu ku sii daayayna yahay nin calooshiisa u shaqeesta ah, taariikhdiisa oo koobana halkan hoose aydun ka heli kartaan. http://www.hiiraan.com/op2/2010/may/a_decent_into_the_absurd.aspx
Hadaladan xukumada ka yimaada, ayaan ahayn kuwo cusub, waxaana mudo aan fogeen jirtay hadal kasoo yeedhay Gudoomiyaha Olalaha Xibiga UDUB Cismaan Cabdilahi Cigaal (Cismaan Hindi), ee uu ku sheegay Xisbiga Kulmiye mid gacansaar la leeyahay Al Shabaab. Arintan oo xitaa masuuliyiinta UDUB gaadhsiiyeen masuuliyiinta dawlada Ethiopia, oo runtii iyagu aan rumaysan warkaa balse la yaabay eedaynta noocan ah ee ay Xukumada Riyaale kula dul kuftay Xisbiga Kulmiye.
Hadaladan ka imanaya masuuliyiinta UDUB waxa ay saldhig u yihiin barnaamij lasoo qorosheeyay, ujeedadiisuna ahayd sidii loo abuuri lahaa jawi baqdineed iyo dareemo hoose oo la galiyo shacabka Somaliland iyo Goobjoogayaasha Ajinabiga ee qrosheenaya in ay dalka yimaadaan. Waxaana arintaa kaaga filan, wararkan shabakadaha iyo saxaafada gacanta ku hayso xukumada Riyaale mudooyin kan danbe soo saarayaan, ee sheegaya in ay jiraan argagaxiso Al Shabaab u soo dirtay Somaliland, kuwaas oo ay leeyihiin waxa ay imanayaan wakhtiga doorashada Somaliland dhacayso. Arintase cajiibka ah ayaa waxay tahay in shabakada www.Saylac.com, ee xukumada Riyaale taageerta raacisay in war ay ka heshay muwaadin baydhaba jooga, balse dalbaday magaciisa aan la shaacin, sheegay in nimankaasi argagaxisada ahi Somaliland kusoo jeedaan. Taloow ma waxa ay kasii digaysaa qorshahaa UDUB iyo Riyaale rabaan in doorashada ku mijo xaabiyaan?
Madaxtooyada Somaliland ayaa iyana war saxaafadeed ku sheegtay in madaxweyne Riyaale ku gacan saydhay codsi kaga yimid wadamada Europe, oo ka codsaday in uu sii daayo rag iyagu u xidhan falal argagaxisnimo. Waxaa aynu dhamaanteen ka wada dheregsanahay in wadamada reer Europe yihiin kuwo ugu horeeya ee iyagu la dagaalamaya argagaxisnimada, markaa ma ka dhaadhacaysaa caqliga fayoow in reer Europe Riyaale ku amreen in uu sii daayo dadkaa argagaxsada ah. Waxaa kale oo jirta, war bixin qoraal heshiiska Riyaale lasoo galay wadamada reer galbeedka, heshiiskaana waxa ka mid ah oo ku jira in jeel weyn laga dhiso Somaliland, jeelkaasina la keeno maxaabiista Somaliyeed ee falalka dambiyadeed looga soo masaafuriyo Europe.
Waxa aynu ka war qabnaa in Dahir Riyaale ishortaagay dabaal dagii xuskii lasoo noqoshadii Jamuuriyada Somaliland 18 MAY, Isaga oo markaa sabab uga dhigaya arimo xaga nabad galyada la xidhiidha loo joojiyay xafladaas. Waxaa xusid mudan in aan intii Somaliland xornimadeeda lasoo noqotay tan iyo 1991, aan mar qudha baaqan dabaaldaga xuska sanadguurada 18 MAY. Maanta oo Somaliland nabad ku joogtay 19 sano ay macquul u tahay in dabaal dagaa la baajiyo. Waa maxay sabatu tallow? Sidayse ku dhacday in khatartaa jirta aan la la wadaagin madaxda Baarlamaanka, Guurtida iyo Xisbiyada mucaaridka.
Waxaa lahayaa oo soo shaac baxday in masuuliyiin ka tirsan xukumada Somaliland ay u sheegeen qaar ka mid ah Goob Joogayaashii South Afrika, ee doonayay in ay yimaadaan doorashada Somaliland, in aanay doorashadii Somaliland dhaceen arimo la xidhiidha xaga nabadgalyada awgeed. Khal khalna galiyeen waftigii goobjoogayaasha ee rabay inay ka qayb galaan doorashadaa. Warkaana waxaa laga soo wariyay masuuliyiin South Africa ah, oo rabay in ay bal warkan baadi goobaan, oo xaqiiqdiisa raadiyaan.
Waxaa aynu hore u ogayan in sanadadii la dhaafay ee 2009 xukumada Riyaale dalka ka fulisay falal argagaxiso, oo ay ka mid ahaayeen.
Bishii November 1, 2009 : Waxaa qarax miino lagu dilay Taliyihii Qaybta 12aad ee Ciidanka Qaranka Somaliland Rabi haw naxariiste Gaashaanle Sare Cismaan Yuusuf Nuur isaga oo maraya magaalada Laas Caanood dhexdeeda.
Bishii November 4, 2009 Xildhibaan Maxamed Faarax Qabile oo Shir-jaraa’id ku qabtay Magaalada Hargeysa, ayaa sheegay in saddex Nin isku dayeen in ay goor habeenimo ah toogasho ku dilaan, balse uu ka badbaaday. Dilkaas oo uu ka dambeeyay Madaxweyne Rayaale, ka dib markii sida uu sheegay uu Madaxweynuhu amar ku bixiyay in la sii daayo Taliyihii Dembi-baadhista ee Berbera, ee falkaa lagu eedeeyay. http://www.somaliland.org/2009/11/18/mudane-ka-tirsan-golaha-wakiilada-oo-mweyne-rayaale-ku-eedeeyay-inuu-ka-dambeeyay-isku-day-dil/
Bishii 11 2009 wadada u dhaxeesa Hargeisa iyo Awdal waxaa lagu dilay dad rayid ah, oo u socdaygobolka Awdal. Dadkaas oo ilaa iminka cidii dishay aan la horkeenin sharciga. Balse qaarkamid ahaa dadkii iyagu ka bad baaday shirqoolkaa, ayaa sheegay in ciidankii laayay wateen gawaadhi watay number plate ka dawlada Somaliland.
Xukumada Riyaale ayaa muuqata mid isu tustay in hadii dalka ka dhacaan doorasho, aanay marnaba suurtoobeen in shacabka maanta joogaa mar danbe soo dooranayaan. Sidaa darteed, waxa ay ka doorbideen in dalka ay gashaan xaalad kala guur iyo argagax leh. Kuwaas oo maanta aynu aragno in ay soo if baxayaan dareemo xukumadu soo galisay suuqa oo tibaaxaya in ururka Al-shabaab qaraxyo Somaliland ka samaynayaan ka hor intaanay dalka ka qabsoomin doorashada madaxtooyada Somaliland ee dhacaysa 26 Jun 2010.
Waxaanay u muuqataa in xukumada Riyaale qiil u sameenayso barnaamij hore ugu qorsheesnaa, kaas oo ahaa in wakhtigaa doorashada ka hor, maleegaan falal argagaxisnimo, iyaga oo adeegsanayaan tabo iyo xeelado casriyaysan oo u eg kuwa kooxaha Al shabaab isticmaalaan, iyaga oo bartilmaameed ka dhiganaya qaraxyo lagu samaynayo goobo istaraatiji ah iyo dilal gaadmo ah oo lala beegsanyo shakhsiyaad ka midda Siyaasiyiinta Somaliland.
Daba gallada ku aadan baadhitaanka qoshaha hawl-gallkan ayaa waxay u muuqataa in Xukumada Riyaale ka faa’iidaysanayo xidhiidho dahsoon oo ay la samaysteen shakhsiyaad iyagu lagu dhextuuray Ururka AlShabaab. Kuwaa oo iyagu noqon doona kuwa hirgalinta amuurahan loo adeegsado.
Waxaase aanay ogayn in masuul ka yihiin wixii dhibaato ah, ee lasoo darista doorashada madaxtooyada ee Somaliland ka dhacaysa bisha Jun 26 2010.
Previous Post“Meel cadaadis la isku saaro in Argagixisada la sii daayo ma arag, M/weynahana…”Next PostDaahir Rayaale Kaahin Oo Xilkii Olalaha Doorashad Ka Wareejiyay Cismaan Hindi	Blog